विश्वकप फाइनलमा एकमात्रै ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी को हुन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
/ Mon, March 18, 2019
विश्वकप फाइनलमा एकमात्रै ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी को हुन ?
जेठ २९ गते, २०७५ - १४:१०
मुख्य समाचार, खेलकुद
विश्वकप फुटबलको इतिहासमा हालसम्म एकजना खेलाडीले मात्र फाइनल खेलमा ह्याट्रिक गरेका छन् । सन् १९६६ को विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डका खेलाडी जेफरी हस्र्टले ह्याट्रिक गरेका थिए । उक्त विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डले अतिरिक्त समयमा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीलाई ४-२ गोलले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि चुमेको थियो ।
उक्त विश्वकपको फाइनल निकै रोमाञ्चक थियो । निर्धारित समयको खेल २-२ गोलको बराबरीमा सकिएपछि हारजितको निर्णयका लागि अतिरिक्त समय थप गरिएको थियो। त्यसपछि जेफरीले १०१ र १२० मिनेटमा लगातार दुई गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई विजयी बनाएका थिए । त्यसअघि उनले निर्धारित समयको १८औं मिनेटमा टोलीका लागि पहिलो गोल गरेका थिए ।
उक्त विश्वकपमा जेफरीले कुल चार गोल गरेका थिए । अर्को एक गोल भने उनले क्वार्टरफाइनल खेलमा गरेका थिए । उनले क्वार्टरफाइनल खेलको ७८औं मिनेटमा गोल गरेपछि इङ्ल्यान्ड बलियो प्रतिद्वन्द्वी अर्जेन्टिनालाई १-० ले हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । सन् १९६६ देखि सन् १९७२ को बीचमा इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीबाट ४९ खेल खेल्दै २४ गोल गरेका जेफरी हाल ७६ वर्षका भए ।
जेफरीले इङ्ल्यान्डका लागि सन् १९७० को विश्वकपमा पनि एक गोल गरेका थिए । उनले वेस्टहाम युनाइटेड, स्टोक सिटी, वेस्ट ब्रोमविचलगायतका क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल पनि खेलेका थिए । सक्रिय खेल जीवनबाट सन्न्यास लिएपछि उनले लामो समय प्रशिक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । एजेन्सी
जेठ २९ गते, २०७५ - १४:१० मा प्रकाशित
सिके राउतले पार्टीको नाम फेरेर यस्तो राखे, चुनाव चिन्ह अष्टदल
जनकपुरधाम । सिके राउतको पार्टी (स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन) को नाम परिवर्तन भएको छ । सिरहाको लहानमा दुई...
करिश्माले एसइइकाे परीक्षा दिने
काठमाडौं । सदावहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई अहिले परीक्षाको चटारो छ । उनी यो वर्ष काठमाडौंबाट...
पढ्नुहोस् जनयुुद्धका ७ प्रतिबद्धता –पुरा भए की भएनन् ?
यस्ता छन् जनयुद्ध सुरु गर्दाका सात प्रतिबद्धता– १. हाम्रो योजना क्रान्तिकारी हिंसासम्बन्धी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका...
चाणक्यको यी १० नीतिलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईंको जीतै जीत
चाणक्य नीति १ःआफूले सोचेको कुरालाई व्यक्त हुन नदिनुहोस् । वुद्धिमान मानिसले आफ्नो योजना बारे कसैलाई...
सपनाकाे फल यस्ताे हुन्छ थाहा पाउनुहाेस्
काठमाडौं । सपना एक सामान्य स्वभाविक प्रक्रिया हो । समान्यतः सबैले सपना देख्छन् । तर सपनाका विषयमा पनि...
कुन जिल्लाको नेतृत्व कसलाई ? नेकपामा यसरी हुँदैछ जिम्मेवारी वाँडफाँड
काठमाडौं । नेकपाको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको बताइएको छ । नेकपा उच्च स्रोतकाअनुसार ७७ वटै...
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावली आज अर्जेन्टिना जाँदै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली आज नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अर्जेण्टिना...
आज कांग्रेस केन्दीय समितिको बैठक, सिटौला र पौडेलले बहिस्कार गर्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको अनुशासन र निर्वाचन...
काठमाडौं उपत्यकामा भुकम्पको धक्का
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। सोमबार बिहान ९ बजेर १ मिनेटको आसपासमा...
प्रिमियर लिगमा सिटी र लिभरपुलको घम्साघम्सि : लिभरपुल शिर्ष स्थानमा उक्लियो
एजेन्सी । ईङलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ३१ औं चरणको खेलमा फुल्ह्यामलाई...
राजपाको विरोधः प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध
सांसदद्धारा चन्दको समुहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह
भुटानी शरणार्थी: कसैको स्वदेश फर्कने इच्छा, कसैको नेपालमै समायोजन होस् भन्ने
बाढी र पहिरोमा परी इन्डोनेसियामा ७७ जनाको मृत्यु
सरकारी सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन
बारी बारीमा केरा !
२६ हजार पाँच सय बर्ड फ्लू रोगी कुखुरा नष्ट
वोलेरोको ठक्करबाट एकको मृत्यु
निःशुल्क सिमकार्ड वितरण, सीम कार्डमा रु २० को बोनस सहित एक सय मेगाबाइट डाटा
गोरखामा भूकम्पको धक्का
सुनको मुल्य घट्यो, तोलाको कति छ ? थाहा पाउनुहोस्
कुखुराको मासु खाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस्: काठमाडौंमा भेटियो बर्डफ्लुको संक्रमण
नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएसँगै सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको सङ्ख्या ह्वात्तै
अवैधरूमा रहेका हतियार ३५ दिनभित्र बुझाए, कारवाही नहुने